Heshiisyada Canopy ee Heshiiska BioSteel ee loogu talagalay Cabitaanka Isboortiga ee CBD • Dawooyinka Inc.eu
Canopy wuxuu soo gabagabeynayaa heshiiska BioSteel ee cabitaanka isboortiga ee CBD
Canopy Growth Corp. wuxuu helaa saamiga ugu badan bioSteel Sports Nutrition Inc. Rafaaqayaasha xashiishadda ayaa doonaya inay ka haraan haraadka dadka macaamiisha ah ee leh cabitaanno isboorti cannabis ah.
Heshiiska, oo Canopy uu ku helayo boqolkiiba 72 boqolkiiba, wuxuu u taagan yahay sharad shirkadda in ka sokow inuu yahay soo saare weyn oo xashiishad ah, wuxuu sidoo kale noqon karaa door muhiim ah suuqa nafaqada adduunka ee $ 50 bilyan. Shuruudaha dhaqaale ee heshiiska markiiba lama shaacin. Maamulaha shirkada Canopy Mark Zekulin ayaa u sheegay BNN Bloomberg in shirkadu ay horkeenidoonto magaca BioSteel nooca ay aasaaseen indhaha xirfadleyda ciyaaraha. Cabitaanka isboortiga ee BioSteel oo casaan ah ayaa durbaba lagu guda jiraa shaqadiisa, ayuu yidhi.
1 Khad cusub
2 Cabitaannada Cannabis
Muuqaal leh alaabooyin cusub oo kala duwan oo ka socda sumadda bioSteel, sida cabitaannada, waxyaabaha la isku qasay iyo budada borotiinka leh CBD, ayaa lagu sii daayay khadka internetka Arbacadii. Alaabada soosaarka caanka ah ee BioSteel, oo lagu aasaasay 2009, waxaa lagu iibsaday boqolkiiba 70 ee kooxaha afarta tartan ee isboorti ee waaweyn ee Waqooyiga Ameerika. John Celenza, maamulaha guud iyo la-aasaasaha BioSteel, ayaa sheegay in sannadihii ugu dambeeyay uu kala xaajooday shirkadaha kale iibka suurta galka ah. Ciyaartooyda Nada waxay bilaabeen inay wax ka weydiiyaan cabitaanada ay la socdaan CBD oo ah xanuun joojiyaha dabiiciga ah, wuxuu bilaabay baaritaan ku saabsan u wareegida cannabis.
"Waxaan run ahaantii aaminsanahay in CBD ay noqon doonto isbedelka weyn ee xiga ee isboortiga, sida cabitaanka isboortiga ee aan sonkorta lahayn," Celenza ayaa u sheegtay BNN Bloomberg wareysi taleefan. "Waxaan u maleyneynaa inay tani tahay tallaabo macquul ah oo noo xigta oo noo socota." Wadahadalada labada shirkadood waxay bilaabmeen sanad uun ka hor markii Celenza ay la kulantay maamulayaasha Canopy khamri lagu cabo baar kuyaala Las Vegas.
Maamulayaasha Mareykanka ayaa hadda baaraya in cuntada iyo cabitaanka ay ku jiraan CBD ay waxyeello u geysan karaan macaamiisha. Sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha qaar, suuqa cabitaanka CBD wuxuu u kori karaa suuq balaayiin doolar ah sannadaha soo socda. Iibinta sharaabka ee lagu shubo CBD ayaa ka kici doonta US $ 227 million sanadkan ilaa US $ 1,4 billion 2023, sida laga soo xigtay Zenith Global.
Si kastaba ha noqotee, Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka wuxuu caddeeyay in CBD ee cuntada iyo cabitaanka ay weli sharci darro tahay inkasta oo sharcigii ugu dambeeyay ee Beeraha Mareykanka ee sharciyeynta hemp. Zekulin wuxuu sheegay inuu rajaynayo wax cad oo ku saabsan alaabada lagu shubo CBD dhawaan. "Ganacsigeennu wuxuu ku dhisan yahay hubaal la'aan," ayuu yiri Zekulin. “Suuqyadu way horumarayaan adduunka oo dhan waxaana jira su’aalo meel walba ka taagan. Ugu dambeyntiina, FDA waa inay tallaabo ka qaaddaa tirada badan ee alaabooyinka aan sharciyeysnayn ee horeyba halkaas u joogey. ”
Canopy wuxuu kaloo isku dayi doonaa inuu dhexgalo shabakadda ballaaran ee loo yaqaan 'BioSteel' ee qaybinta Kanada, Zekulin ayaa intaas ku daray. BioSteel waxay qorsheyneysaa inay ku fiddo Mareykanka iyo Yurub, laba suuq oo waaweyn oo Canopy ay rabto inay maal gasho.
Akhri wax dheeraad ah bnnbloomberg.ca (Source, EN)
Ka waran horumarka agagaarka CBD ee xayawaanka maanta? Mareykanka iyo dad badan oo ...
Eeg midabada midabada adduunka, dareemo dabaysha, ku raaxee qorraxda ... Dooro ...